ဘန်ကောက်မြို့ က မြန်မာတွေဆန္ဒပြ နေတဲ့မြင်ကွင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ က ကိုဗစ်အရေးပေါ် ကာလ တည်ဆဲဥပဒေ အရ လူစုလူဝေးနဲ့ဆန္ဒပြ နေတာကို အရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကြားကပဲမြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ လေးရက်မြောက်နေ့ အဖြစ် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မူ ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီသတင်းကို မအေးအေးမာက တင်ဆက်ပေးမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ကြာသပတေးနေ့ ညပိုင်းမှာပဲရာဂဏန်းလောက်ရှိတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေနဲ့ အတူ သမာဆတ် တက္ကသိုလ်က ထိုင်းကျောင်းသားတွေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေပါ စုဝေးပြီးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင် ဖျက်သိမ်းရေး ….. တို့အရေး တို့အရေး
စစ်အာဏာရှင် အလိုမရှိ …..အလိုမရှိ
မင်းအောင်လှိုင်ကျဆုံးရေး …. တို့အရေး တို့အရေး
သမ္မတနဲ့ အမေစု လွတ်မြောက်ရေး ….. တို့အရေး တို့အရေး”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့် နဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမူကို ကန့်ကွက်ကြောင်း လေးရက်မြောက်နေ့အဖြစ် ဆန္ဒပြနေတာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ က ထိုင်းရော မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ လူစုလူဝေးနဲ့ ဆန္ဒပြရင် ကိုဗစ်ကပ်ဘေး ထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေအရ အရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်း သတိပေးထားတဲ့ကြားကပဲ ကြာသပတေးနေ့ညမှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေက စုဝေးလာကြပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ အလုံးအရင်းနဲ့ စောင့်ကြပ်နေပြီး မိနစ် ၂၀ဆန္ဒပြခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆန္ဒပြပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတဦးလည်းဖြစ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး လည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ဖတ်စဖွန် လည်း လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက စစ်အာဏာသိမ်းတာကို ဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထောက် ခံအားပေးတဲ့အကြောင်း သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အလာတူ ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှေ့မှာလည်း မြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေ စုပေါင်းပြီး ကြာသပတေးနေ့မှာဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။
မွနျမာစဈအာဏာသိမျးမှု ဘနျကောကျဆန်ဒပွပှဲ ထိုငျးတှေ ပါဝငျပူးပေါငျး
ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျ ရဲတပျဖှဲ့က ကိုဗဈအရေးပျေါ ကာလ တညျဆဲဥပဒေ အရ လူစုလူဝေးနဲ့ ဆန်ဒပွ နတောကို အရေးယူမှာဖွဈကွောငျး ထုတျပွနျထားတဲ့ ကွားကပဲမွနျမာပွညျမှာ စဈတပျအာဏာသိမျးတဲ့ လေးရကျမွောကျနေ့ အဖွဈ ဆနျ့ကငျြကနျ့ကှကျမူ ဆကျလုပျခဲ့ပါတယျ ။ ဒီသတငျးကို မအေးအေးမာက တငျဆကျပေးမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈတပျက အာဏာသိမျးတာကို ဆနျ့ကငျြကနျ့ကှကျတဲ့ အနနေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျမွို့ မွနျမာသံရုံးရှမှေ့ာ ကွာသပတေးနေ့ ညပိုငျးမှာပဲရာဂဏနျးလောကျရှိတဲ့မွနျမာအလုပျသမားတှနေဲ့ အတူ သမာဆတျ တက်ကသိုလျက ထိုငျးကြောငျးသားတှနေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံရေးသမားတှပေါ စုဝေးပွီးဆန်ဒပွနကွေပါတယျ။
စဈအာဏာရှငျ ဖကျြသိမျးရေး ….. တို့အရေး တို့အရေး
စဈအာဏာရှငျ အလိုမရှိ …..အလိုမရှိ
မငျးအောငျလှိုငျကဆြုံးရေး …. တို့အရေး တို့အရေး
သမ်မတနဲ့ အမစေု လှတျမွောကျရေး ….. တို့အရေး တို့အရေး”
မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့ နဲ့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ပွနျလှတျပေးဖို့နဲ့ စဈအာဏာသိမျးမူကို ကနျ့ကှကျကွောငျး လေးရကျမွောကျနအေ့ဖွဈ ဆန်ဒပွနတောပါ။
ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျ ရဲတပျဖှဲ့က ထိုငျးရော မွနျမာနိုငျငံသားတှနေဲ့ လူစုလူဝေးနဲ့ ဆန်ဒပွရငျ ကိုဗဈကပျဘေး ထိနျးခြုပျရေး ဥပဒအေရ အရေးယူမှာဖွဈကွောငျး သတိပေးထားတဲ့ကွားကပဲ ကွာသပတေးနညေ့မှာ မွနျမာအလုပျသမားတှကေ စုဝေးလာကွပွီး ဆန်ဒပွခဲ့ကွတာပါ။ ဒီဆန်ဒပွပှဲကိုတော့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှေ အလုံးအရငျးနဲ့ စောငျ့ကွပျနပွေီး မိနဈ ၂၀ဆန်ဒပွခှငျ့ ပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီဆန်ဒပွပှဲကို ထိုငျးနိုငျငံရေးသမားတဦးလညျးဖွဈ ခှဲစိတျဆရာဝနျကွီး လညျးဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာ ဖတျစဖှနျ လညျး လာရောကျပူးပေါငျးခဲ့ပွီးမွနျမာနိုငျငံအတှငျးက စဈအာဏာသိမျးတာကို ဆနျ့ကငျြတဲ့လှုပျရှားမှုတှကေို ထောကျ ခံအားပေးတဲ့အကွောငျး သတငျးထောကျတှကေို ပွောဆိုသှားပါတယျ။
အလာတူ ထိုငျးနိုငျငံခငျြးမိုငျမွို့ မွနျမာကောငျစဈဝနျရုံးရှမှေ့ာလညျး မွနျမာကြောငျးသားတှနေဲ့ အလုပျသမားတှေ စုပေါငျးပွီး ကွာသပတေးနမှေ့ာဆန်ဒပွခဲ့ပါတယျ။